निःशुल्क अमेरिकी नागरिकता परीक्षण क्लास | यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
अधिकार र कानून
जब र करियर
प्रसिद्धि भरिएको कोठा
टगल मेनु Refugee Center OnlineRCO कक्षा
निःशुल्क अमेरिकी नागरिकता परीक्षण क्लास
तपाईं प्राकृतिक लागि तयार गर्न निःशुल्क अनलाइन वर्ग.
यो वर्ग तपाईं अमेरिकी नागरिकता परीक्षण को लागि तयार हुनेछ.
आफ्नो नयाँ देशमा एक नागरिक बन्ने ठूलो कदम हो. एक नागरिक, तपाईं राष्ट्रिय चुनावमा मतदान र आफ्नो समुदायमा योगदान गर्न सक्छन्. अनुसन्धान पनि गर्ने naturalize व्यक्तिहरूलाई देखाउँछ, वा नागरिक बन्न, अक्सर राम्रो काम गर्ने मौका छ बढी पैसा बनाउन र.
यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन मा, हामी विश्वास शरणार्थी र आप्रवासी हाम्रो समाज अनमोल सदस्य हुन्. हामी नागरिकता आफ्नो बाटो मा तपाईंलाई मदत गर्न गर्व.
यो कार्यक्रम बारे जानकारी
यो अमेरिकी नागरिकता परीक्षण लागि तयार अनलाइन वर्ग छ. तपाईंले आफ्नो फोन वा कम्प्युटरमा यो वर्ग लाग्न सक्छ.
कक्षा आत्म-paced छ, त्यसैले तपाईं कुनै पनि समयमा सिक्न सक्छौं.
तपाईं आज शुरू गर्न सक्छन्!
हाम्रो कक्षाहरू तपाईं परीक्षण को लागि तयार हुनेछ, तर केवल अमेरिकी सरकार तपाईं नागरिकता दिन सक्छ. कुनै पनि वेबसाइटमा तपाईं बताउँछ भने तिनीहरूले तपाईंलाई अमेरिकी नागरिकता दिन सक्छ, यो सत्य होइन. तिनीहरूलाई पैसा वा व्यक्तिगत जानकारी दिन छैन.
स्वागत नागरिकता परीक्षण तयारी क्लास गर्न!
यो वर्ग तीन विषयहरू छ: एकीकृत Civics, इतिहास, र सरकार.
छन् 30 केही पढाइ समावेश पाठ, गतिविधिहरु, भिडियो, र शब्दावली समीक्षा. प्रत्येक पाठ तपाईं आफ्नो समझ परीक्षण गर्न सक्छ त अन्त मा यसको आफ्नै क्विज छ. तपाईं आफ्नो जवाफ सही वा गलत छ भने हेर्न जाँच गर्न सक्नुहुन्छ तुरुन्तै. तपाईं आफ्नो स्कोर सुधार गर्न चाहनुहुन्छ रूपमा धेरै समय रूपमा परीक्षण फेरि कब्जामा लिनु सक्नुहुन्छ.
आफ्नो अन्तिम पाठ लागि, तपाईं पूर्ण-लम्बाइ अभ्यास परीक्षा पूरा हुनेछ. बस आफ्नो शास्त्र परीक्षा समयमा जस्तै, अन्तिम प्रतियोगिता पारित गर्न, तपाईं जवाफ पर्छ6बाहिर 10 प्रश्न सही.
कम्प्युटर वा आफ्नो फोनमा यो पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेपछि, तपाईं शास्त्र परीक्षा पास गर्न तयार हुनेछ, समीकरण लागि आवश्यकताहरु को एक. तपाईं पनि समीकरण प्रक्रियामा संलग्न विभिन्न कदम राम्रो बुझ्न.
अब कक्षा सुरु!
यो वर्ग मा पाठ
एक नागरिक बन्ने
एकीकृत Civics 1
एकीकृत शास्त्र परिचय
एकीकृत Civics 2
पचास अमेरिका, वासिंगटन डिसी।, र संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रहरूमा
एकीकृत Civics 3
पानी को शरीर
एकीकृत Civics 4
एकीकृत Civics 5
एकीकृत Civics 6
एकीकृत Civics 7
अमेरिका मा बिदाहरू
एकीकृत Civics 8
समीक्षा - एकीकृत civics
अमेरिकी इतिहास 1
अमेरिकी इतिहासमा परिचय
अमेरिकी इतिहास 2
अमेरिकी इतिहास 3
अमेरिकी इतिहास 4
अमेरिकी इतिहास 5
एक नयाँ देश
अमेरिकी इतिहास 6
पश्चिम तिर हेर्दै
अमेरिकी इतिहास 7
यो नागरिक युद्ध
अमेरिकी इतिहास 8
अमेरिकी इतिहास 9
अमेरिकी इतिहास 10
अमेरिकी नागरिक अधिकार आन्दोलन
अमेरिकी इतिहास 11
अमेरिकी इतिहास 12
सेप्टेम्बर 11 औं र आतंक मा युद्ध
अमेरिकी इतिहास 13
विचार र समीक्षा - अमेरिकी इतिहास
अमेरिकी सरकार 1
अमेरिकी सरकारको परिचय
अमेरिकी सरकार 2
अमेरिकी सरकार 3
अमेरिकी सरकार 4
यो न्यायिक शाखा
अमेरिकी सरकार 5
अमेरिकी सरकार 6
अमेरिकी सरकार 7
सरकार र तपाईं
अमेरिकी सरकार 8
विचार र समीक्षा - अमेरिकी सरकार
अन्तिम शास्त्र क्विज 1
नागरिकता अभ्यास प्रतियोगिता
कार्यक्रम र आफ्नो शहर स्रोतहरू लागि खोज.
2420 पूर्वोत्तर Sandy Boulevard सुइट 102 पोर्टल्याण्ड, या 97232
कक्षा © 2019
तपाईं केवल अंग्रेजी मा सिक्न सक्छौं वा आफ्नो भाषा र अंग्रेजी मा तपाईं सिक्न सक्छौं.